राष्ट्रिय जनगणनाको काम दोस्रो चरणमा प्रवेश
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को काम दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । गत भदौ ३० गतेदेखि असोज १८ गतेसम्म भएको घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय जनगणना दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले घर तथा घरपरिवारको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय जनगणना दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको जानकारी दिनुभयो ।
अगामी कात्तिक २५ देखि मङ्सिर ९ गतेसम्म हुने मुख्य गणनामा भने एक जना व्यक्तिले कतिवटा बैङ्कमा खाता खोलिएका छन्? खाता नखोलिएका व्यक्तिको सङ्ख्या कति छ? बैङ्कबाट ऋण लिएका र व्यवसायका लागि तालिम लिएका व्यक्ति कति जना छन्? भन्ने यस वर्षको जनगणनामा नयाँ प्रश्नावली थप गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि देशभर ८७ वटा प्रदेश तथा जिल्ला जनगणना र ३४९ वटा स्थानीय कार्यालय सञ्चालन आएका छन् । यस पटकको जनगणनाको नारा ‘मेरो गणाना मेरो सहभागिता भन्ने तय’ गरिएको छ ।